Dနေမင်း(နည်းပညာ): How To Backup & Restore Your Pc ( ကွန်ပျူတာမှာဘက်အပ်လုပ်ယူနည်း & ပြန်သွင်းနည်
How To Backup & Restore Your Pc ( ကွန်ပျူတာမှာဘက်အပ်လုပ်ယူနည်း & ပြန်သွင်းနည်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာမှာ ဘက်အပ် လုပ်ဆောင်ခြင်း ကဏ္ဍကို အရှင်းလင်းဆုံး၊ နားလည်နိုင်ဆုံး ဖြစ်စေရန်အတွက် အသေးစိတ်တစ်ဆင့်ချင်းကို ပုံလေးတွေနဲ့ တကွ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြပေးထားတာပါ။
ကဲစလိုက်ကြရအောင် back up ဘာလို့ လုပ်ရသလဲဆိုတာကို အရင် သိသလောက်ပြောပြပါ့မယ်နော်....
ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ ဝင်းဒိုးပြဿနာတွေ ခဏခဏတက်နေတဲ့အတွက် အစကနေပြန်ပြန်ပြီး Windows မတင်ချင်တာရယ်၊ ကိုယ်ထည့်သွင့်ထားတဲ့ program တွေကို Windows ကြောင့်၊ virus ကြောင့်၊ အခြားပြဿနာ တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်စေ မပျက်ဆီး မဆုံးရှုံးခင်မှာ back up လုပ်ထားလိုက်ရင် Windows ပြန်တင်စရာမလိုဘဲ အဲဒီ back up Image ဖိုင်ကို ပြန်ထည့်လိုက်တာနဲ့ Windows လည်း တင်ပြီးသား ဖြစ်သလို Software တွေလည်း တင်ပြီးသား ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Windows Partition အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို Image file အဖြစ် copy ကူးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...ဒါလေးကို ကျွန်တော် စတင်လုပ်ခဲ့စဉ်က နေမင်းမောင် ဆိုဒ်မှာ တွေ့ပြီး လေ့လာလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်...
သိထားရမှာကတော့ back up လုပ်တယ်ဆိုတာ ဝင်းဒိုးတင်ပြီး အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ Program တွေ၊ Driver တွေ ထည့်ပြီးတဲ့ အချိန် မှာ လုပ်ထား တာပိုကောင်းပါမယ်နော်...အချိန်ကာလကြာလာမှ လုပ်ကြမယ်ဆို ဝင်းဒိုးထဲမှာလဲ program တွေများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချိန်ကြမှ back up လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန် အရမ်းကြာမှာဖြစ်ပြီ Restore ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် လဲအချိန်တွေကြာနေ အုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ အပေါ်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့သလို ဝင်းဒိုးတင်ပြီး လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်စွပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ back up လုပ်ပေးကြပါ ဒါမှ Windows ပြန်တင်ရတဲ့ ဒုက္ခ ၊ program တွေ ၊ Driver တွေ ထည့်သွင်း ရတဲ့ ဒုက္ခ မှကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဝင်းဒိုးတစ်ခုလုံးကို back up မလုပ်ဘဲ မိမိအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ program ကိုဘဲ back up လုပ်နိုင်တာပါ။ မိမိတို့back up လုပ်တဲ့အချိန်များမှာ Data တွေကိုရွေးချယ်ပြီး back up လုပ်ခွင့်ရှိတာကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိ back up လုပ်ချင်တာကိုဘဲ လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ restore ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ မိမိအသုံးပြုမယ့် back up file ကိုဘဲ restore ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စတင်လေ့လာစဉ်က မှတ်သားခဲ့ဖူးတာလေးတွေကို ယခုချိန် ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
မူပိုင်နည်းပညာတွေ မဟုတ်ပေမယ့် လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အနေနဲ့ မှတ်သားထားမိသလောက်တော့ ပြန်လည် ဝေမျှသွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်...
ပုံနှင့်တစ်ကွ ကျွန်တော် လုပ်ထားတာလေးတွေကို တဆင့်ခြင်းရှင်းသွားပါ့မယ်နော်..
စဖို့ရာအတွက် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှ Contropanel ကိုသွားလိုက်ပါ
အဆင့် (၁) အနေနဲ့ Backup and Restore ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၂) အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီး Set Up Backup ကိုကလစ်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၃) အနေနဲ့ကတော့ အပိုင်းတွေ မြင်နေရပါမယ် မိမိတို့ သိမ်းလိုသောအပိုင်းကို ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဆင့် (၄) အနေနဲ့ကတော့ Let Me Choose ဆိုတာအမှတ်ပေးကာ အောက်က Next ဆိုတာကလစ်ပါ။
အဆင့် (၅) အနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ Backup လ်ုပလိုသော အပိုင်းတွေ ဖိုင်တွေ ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် (၆) အနေနဲ့Change schedule ဆိုတာကလစ်ပြီး ဆက်သွားပါ။
အဆင့် (၇) အနေနဲ့ အချိန်ကာလ နေ့ရက်တွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် (၈) အနေနဲ့ မိမိတို့ Backup လုပ်ငန်းစတင်နေပါပြီ....စောင့်နေလိုက်ပါနော်။
အချိန် အသင့်တင့်တော့ ကြာပါမည်... စောင့်နေရပါမယ်နော်...ဒါဆို မကြာခင်မှာ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှ Backup ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်... သည်လောက်ဆို Backup လုပ်ဆောင်ခြင်း ကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. BACKUP လုပ်ဆောင်ချက်လေးများကို စာအုပ်အဖြစ် ဒေါင်းယူလိုပါက.....
How To Backup Your Pc ( PDF-DOWNLAOD)
Restore လုပ်နည်းကိုလည်း ဆက်လက် ရေးသား ပေးပါ့မယ်...နော်..
ကွန်ပျူ တာမှာ RESTORE ပြုလုပ်နည်း
အဆင့် ( ၁ ) အနေနဲ့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ နဲ့ Contropanel ကိုဝင်ပြီး Backup and restore ကိုဝင်ပါ။
အဆင့် ( ၂ ) အနေနဲ့ Recover system setting or your computer ကို Click ပါ။
အဆင့် ( ၃ ) အနေနဲ့ကတော့ Advance recovery method ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ
အဆင့် ( ၄ ) အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီး ( Choose Advance recovery method ) တွင် မိမိသိမ်းထားခဲ့ တဲ့ Back up file မှတစ်ဆင့် Restore လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Useasystem image you created earlier to recover your computer ကိုရွေးပြီး Click ပေးလိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၅ ) ကတော့ Restart ဆိုတာကလစ်လိုက်ပါနော်.
အဆင့် ( ၆ ) မှာဆက်လက်ပြီးတော့ Next ဆိုတာကလစ်ပါ။
အဆင့် ( ၇ ) ကတော့ အောက်ကပုံတိုင်း
back up လုပ်ထားတဲ့ image file တည်နေရာကို အလိုအလျောက် ဖေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ Next က်ို ဆက်ပြီး Click ပါ။
အဆင့် ( ၈ ) မှာက Next ဆိုတာနဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၉ ) ကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါ အောက်ကတိုင်း Finish ဆိုတာပေါ့ဗျာ..
အဆင့် ( ၁၀ ) အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နောက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ် Restore လုပ်ငန်းစဆင်နေပါပြီ.. စောင့်နေလိုက်ပေတော့နော်...အိုကေ
စာအုပ်အဖြစ်ဒေါင်းယူလိုပါက အောက်မှာ Backup လုပ်နည်း နဲ့ Restore လုပ်နည်းဆိုပြီး ၂ အုပ်ခွဲရေးထားပါတယ်..နော်
ကွန်ပျူ တာ Backup လုပ်နည်း
Download With Widiafire
ကွန်ပျူတာ Restore လုပ်နည်း
ကျနော်ရေးသော အခြားစာအုပ်များ ဒေါင်းယူလိုပါက သည်မှာ ၀င်ဒေါင်းလိုက်ပါနော်
Posted by Thu Rein at 1:19 AM